Semalt: Ungayithintela njani yonke iNkqubo yeeNtengiso ngeeNtlawulo?
Iintengiso ze-Browser azikho nje inkathazo ebonakalayo kodwa zibeka ingozi enkulu yokhuseleko. Kukho iziphumo ezininzi zokuziphatha zokuvimba ezi ntengiso. Ngokufezekisa i-blockers yezibhengezo kwisiphequluli sakho, unqumle umvuzo kwimisebenzi yokubhala, ukuyila, nokubonelela umxholo oqhele ukuwujonga ngokukhululekileyo. Iintengiso ezithandayo ukuzivimba zifanayo ezibonelela ngemali yokubeka zonke izinto kwi-intanethi. Nangona kunjalo, ukuhamba kwezi ntengiso ekugqibeleni kuyonakalisa amava okukhangela.
UMichael Brown, umbutho wokuthengisa ovela kwi-10 (Semalt , unika apha ambalwa amaphuzu okukhumbula:
Abalobi besikhangiso basemthethweni kakhulu oku kuthetha ukuba abanalo mingcipheko - ladies hats fasinators fashion. Isigqibo malunga nendlela yokuvimbela iintengiso zihlala ngokupheleleyo kuwe. Ukuba wenza isigqibo sokusebenzisa i-Ad Blocker, qiniseka ukuba ihlambulukile, kwaye iya kukukhonza kakuhle. Nangona kunjalo, banemiqathango ethile.
Inkxaso ye-Ad Blockers ivela kumbutho omnye okanye umntu. Ngoko ke, umntu kufuneka aqhube uphando lwabo kwinkampani ngaphambi kokusebenzisa inkonzo yabo. Kufuneka uqinisekise ukuba iya kubamba ngokusemthethweni zonke iintengiso xa usayinwe nabo. Kukho imeko apho ubunini beenkonzo ze-Ad Blocking beguquka kwaye abanini abatsha bafumana iiproyamu kwiinkampani ezithile ukuba badumise iidilesi zabo.
Ukongezelela isongezelelo kwisiphequluli kuya kunciphisa umkhangeli wehla. Nangona kunjalo, ukuba unomshini osebenzayo, oku akufanele kukukhathaze. Ngaphandle koko, kufuneka uzinqande ezimbini okanye ezintathu kwiithebhu ngexesha elifanayo.
Izandiso zidinga ukuhlaziywa rhoqo okuthatha ixesha lakho kunye nezibonelelo..
I-Ad Blockers ayikwazi ukusebenza kakuhle ngaphandle kokubhalisa. Kufuneka ukhethe uluhlu lwewebhu ezifisa ukuba zivaliwe kwaye uzifake ngesandla ngokuluhlu lwebhloko.
Akunakwenzeka ukuba usebenze nge-Ad Blocker yonxibelelwano kwinkqubo xa uqhuba iziphequluli ezininzi.
Ngenhlanhla, kukho isisombululo esilungileyo esingenakho ukuhlawulwa ngaphandle kokubhaliselwa. Ikhusela iintengiso zenkqubo yonke ngonaphakade. Ayifuni isofthiwe ukuyifaka, oku kuthetha ukuba ayiyi kuthoba inkqubo yakho.
Fakela iifayile zomkhosi kwiMVPS. Iguqula ii-URL zomncedisi wezaziso ezinomntu ongenanto. Xa ikhompyutha izama ukufikelela kwi-intanethi, iya kubuyisa le ntsimi engenanto ayiyikukhuphela isilengiso esiza kukugcina ixesha elininzi kunye nezibonelelo. Oku kulandelayo yinkqubo yokukhusela iintengiso ngokusebenzisa indlela ye-MVPS.
Qinisekisa ukuba unamalungelo okulawula. Vula ikhonsole ye "Run" ngokucindezela iqhosha leefestile kunye no-R ngokukhawuleza.
Faka "IiNkonzo.sc" kwaye faka inketho ye "DNS Client". Chofoza ngokukhawuleza kuyo uze uphelele ukuya kwi "Properties" uze ukhethe "Yeka."
Ukusuka kwimenyu yokuhlahla "uhlobo lokuqalisa", khetha "Umqulu" okanye "Khubazekile." Iingcaphephe zincoma indlela yokwenza incwadi.
Sebenzisa izicwangciso ezintsha uze uqalise kwakhona.
Faka iifayile ezifakiweyo kwi "C: \_ Windows \_ System32 \_ abaqhubi \_ njl" kunye nokuhlaziywa.
Ukuba umkhuseli-ntsholongwane okanye umkhuseli weefestile uzama ukuthatha inyathelo malunga nesenzo, ukuncipha.
Ngoku uyazi ukukhusela iintengiso ngaphandle kwesikhangiso kwi-intanethi. Qinisekisa ukuhlaziya rhoqo iifayile zezimphathi kwaye uzibuyisele kwi-directory echaziweyo.